एउटा भेडाले ओबामाको फोटो चिन्यो.... - TV Annapurna
एउटा भेडाले ओबामाको फोटो चिन्यो….
भेडाले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको फोटो चिनेको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनमा प्रयोग गरिएको भेडाले ओबामाको फोटो पहिचान गरेको हो ।
भेडाले मानिसको अनुहार पहिचान गर्न सक्छ-सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अध्ययन गरिएको थियो । साइन्स न्युज डट कममा प्रकाशित खबरअनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूले भेडालाई ओबामा, अमेरिकी अभिनेता जेक गेलेनहाल, बेलायती मोडल एम्मा स्टोन, र बिबिसी समाचारवाचक फियोना ब्रुसको अनुहार चिन्न सक्नेगरी तालिम दिएका थिए । तालिमपछि भेडाले अपरिचित र परिचित अनुहार छुट्याएको समाचारमा छ ।
यसअघिका अध्ययनमा पनि भेडाले आफ्नो रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई चिन्न सक्ने पत्ता लागेको थियो । वेल्स माउन्टेन प्रजातिका ८ पोथी भेडालाई चार सेलेब्रिटीका अनुहार छुट्याउन लगाइएको थियो । भेडाहरूलाई दुई फरक कम्प्युटर स्क्रिनमा अलग–अलग फोटो देखाइएको थियो र त्यही फोटो हेरेर परिचित अनुहार छुट्याएको थियो । अनुसन्धानमा भेडाले देखाएको गतिविधिको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
बाँदर, चिम्पान्जी र मान्छेजस्तै अनुहार पहिचान गर्ने क्षमता भेडामा पनि हुने अनुसन्धानपछि पुष्टि भएको छ । यो अध्ययनले हन्टिङ्टन्स, पार्किन्सन्सलगायत स्नायुकोषिकासँग सम्बन्धित रोगबारे बुझ्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।
बाहिरी चक्रपथ र नागढुंगा सुरुङमार्गको जग्गा अधिग्रहण एकैपटक शुरु, तपाईको जग्गा पर्छ ?
कांग्रेसले १०० र एमालेले ८७ सिट जित्ने दाबी, माओवादी गृहकार्यमा (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)